Dowladda oo beenisay in la fasaxay qaadka laga keeno dalka Kenya | Dhacdo
Dowladda oo beenisay in la fasaxay qaadka laga keeno dalka Kenya
Wasiirka Maaliyadda Somaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay inaysan weli dowladdu fasaxin qaadka Mirowga ee laga keeno dalka Kenya.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sheegay hadalkiisii shalay uu ka jeediyay Magaalada Muqdisho in si khaldan loo fasiray, isla-markaana waxa uu ka hadlayay uu ahaa qaadka Hareeriga ee dalka Itoobiya laga keeno.
“Waxaan ka hadlay oo aan doonayay inaan cadeeyo qaadka Hareeriga ee Somaliya yimaada, oo dadka qaar yiraahdeen qolo ayay u xiran tahay ama dad gooniya ayay u xiran tahay. Muhiimaddu ugu weyn waxay ahayd inaan halkaa ka cadeeyo inaanan jaadkaa Hareeriga ahi cid gooniya u xirnayn, cid weliba oo doontaana soo dejisan karto. Waxaa looga baahan yahay qofkii doonaya in uu arrintaa galo inuu sharciga qaato, leesanka qaato, ruqsadda canshuurtana bixiyo, intaas uun bay muhiimaddu ahayd.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa tilmaamay in cid kastoo warkiisa si khalada u fasiratay uu ogeysiinayo in arrinta uu ka hadlay ay ku saabsan tahay oo keliya qaadka Hareeriga ee Itoobiya.
“Marka haddii khalad la fahmay shalay ama si khalada loo turjuntay arrintu Hareerigey ku saabsan tahay, qaadka Hareeriga ah ayay ku saabsan tahay oo cid gooniya u xirnayn.” Ayuu yiri Wasiir Beyle.
Warbaahinta qaybteed ayaa baahisay in Dowladda Federaalka ay fasaxday qaadkii Mirowga ee dalka Kenya laga keeni jiray, waxayna tani ku soo aaday, saacado yar uun ka dib dagaalkii shalay ka dhacay Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Isbitaalkii weynaa ee Istartiin oo ku xirmay dagaalada Guriceel
Tiro Hoobiyeyaal ah oo maanta ku dhacay Isbitaalka Istarliin ee Magaalada Guriceel ayaa hakad ku keenay adeeggii caafimaad ee isbitaalkaasi uu u...